अर्को पार्टी खोल्ने निर्णय गर्‍यौं : माधव नेपाल — Purbicommand
२०७८ जेष्ठ ९, आईतवार ०४:२३ गते
यी घटनाक्रमसँगै पार्टी पुन: लगभग विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । वरिष्ठ नेता नेपालले अर्को पार्टी खोल्ने निर्णयमा पुगेको बताएका छन् । कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा नेता नेपालले पार्टी खोल्ने भनेका छन् ।
तपाईंहरूले पनि समयमै निर्णय गर्न त नसक्नुभएकै हो नि ?
हामीसँग कुनै मतलब नराखेर उहाँले नै दक्षिणपन्थीहरूसँग साँठगाँठ गरेको होइन ? उहाँले एकलौटी गर्नुभएको छ । विदेशीसँग याचना गर्नुभएको छ । ओलीजीले सोधेको स्पष्टीकरणबारे के कुरा गर्नु !
त्यो कार्यदलको औचित्य उहाँले सिध्याइदिनुभयो । यत्रो कार्यदल बनेको छ, सरसल्लाह गर्नुपर्दैन ? सोध्दै नसोधी संसद् विघटन गर्ने ? केही सल्लाह गर्नुपर्दैन ? अध्यादेश ल्याउनुअघि केही सल्लाह गर्नुपर्दैन ?